GV Face: Malala Ao Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2013 10:36 GMT
Nankalazaina noho ny fangorahany sy ny herim-pony ho an'izao tontolo izao i Malala, tovovavy 16 taona izay avotra soa aman-tsara raha voan'ny balan'ireo talibana ary voafantina hofidiana tamin'ny Loka Nobel. Mbola anisan'ny olo-malaza manintona ao amin'ny toerana nahaterahany, ao Pakistana izy.
Amin'ny fitantarana amin'ny GV Face amin'ity herinandro ity, hiresaka momba ny antony mahatonga ny fireneny mioko amin'i Malala isika. Hojerentsika ihany koa ny andraikitry ny media sosialy, izay manaratsy azy sy manaparitaka dokam-barotra ratsy momba azy. Namonjy anay avy an'i Karachi ilay mpikatroka, bilaogera sady mpanoratra ao amin'ny GV Pakistaney Sana Saleem (@sanasaleem). Nanatona anay ihany koa i Irfan Ashraf avy ao Illinois, Etazonia. Mpanao gazety pakistaney izy izay niara-nanatontosa ilay horonantsarimihetsiky ny New York Times, Class Dismissed (saranga navahana), lahatsarim-panadihadiana voalohany momba an'i Malala ren'izao tontolo izao tamin'ny taona 2009.
Tonia lefitra ao amin'ny Global Voices aho, sady mpanao gazety Pakistaney (@saharhghazi) ary nanasa ireo vahiny tao amin'ny Hangout. Raha nanontany an'i Sana aho hoe mankahala an'i Malala marina tokoa ve ny vahoaka ao Pakistan? hoy izy namaly [01:000 – 02:50]:
Tsy mino aho fa any amin'i Malala, amin'ny maha-tovovavy na vehivavy na amin'ny maha-Malala fotsiny ny fankahalana, ny fankahalana dia miantefa any amin'ny fitantarana ataon'ny tandrefana mikasika ny zava-misy ao Pakistana, sy ny fitantarana manokana na koa fitantarana voafantina ao anatin'ny politika ivelany na fandaharan'asa Tandrefana. Ka lasa miantefa tsy ara-drariny any amin'i Malala ny fankahalàna ary tena hita tokoa fa maro ny fankalahana, saingy mety ho zavatra na olona mahazo karazana laza amin'ny fampahalalam-baovao tandrefana izany ary indrindra raha lasa malaza amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izany olona izany, izany karazana lonilony izany no hanasanao ny lamba malotonao eo imasom-bahoaka. […]
Amin'ny raharaha Malala, tsara vintana izy satria farafaharatsiny nanohana azy aoka izany ny governemanta na koa ireo olo-malaza. Saingy indrisy, miantefa mivantana any amin'i Malala ny fankahalana marobe noho ny fitantarana mifidifidy ataon'ny tandrefana izay heverina ho tsikeran'ny fomba fijeriny anay na koa ny fitantaran'izy ireo manambony tena mikasika ny olana sasany.
Nandritra ny resadresaka, hoy i Irfan nilaza [05:00 – 06:30 hariva]:
Tsy tokony hijery izany olana izany amin'ny fomba roa mifanipaka isika, tahaka ny Andrefana sy ny Atsinanana, na dia navilin'ny fampahalalam-baovao tandrefana aza ny momba an'i Malala. Ato amin'ny faritra misy anay, manana olana goavana momba ny «maha-lehilahy» izahay, kolontsain-dehilahy izay nihamafy nandritra ny fandaminana ara-pitsipika miaramila tao amin'ny faritra, ka vokatr'izany, isaky ny misy vehivavy manandram-peo, na dia amin'ny fitiavana fianarana aza, dia lazaina avy hatrany fa tandrefana na malalaka loatra, ary tonga dia heverina avy hatrany fa tsy (filàna) fototra mahaolona, sy toa sokajiana ho mpiray teti-dratsy. Ka mba tsy ijerena azy ho Atsinanana na Andrefana, mino aho fa tokony hifantoka amin'ny kolontsainay manokana izahay izay tena mampanjaka ny lehilahy. [.. ] mametraka ny vehivavy ho toy ny toerana ifaninanan'ny kolontsaina roa izahay. Eo no iheverako fa tombotsoa ambony hoan'ny vehivavy koa, ny hiresahana momba an'i Malala, tahaka ny mariky ny fahalalahana, tahaka ny mariky ny fanafahana amin'ny kolontsaina manandratra ny lehilahy fa nobeazina, nofahanana ary nosasana atidoha ho amin'izany ry zareo – tombotsoa lehibe ho azy ireo [vehivavy] izany.
Amin'ity fizarana ity, miresaka betsaka momba ny toerana nahaterahan'i Malala ao Swat koa i Irfan, toerana izay nantsoiny ho paradisa an-tany. Voaroakan'ny tafika pakistaney hivoaka ao amin'ny lemaka ireo Talibana tamin'ny taona 2009, saingy mbola manana olana amin'ny fampianarana ireo tanora ao aminy ny faritra, rehefa ravan'ireo talibana ireo ny sekoly an-jatony.
Ity rakipeo tamin'ny Hangout ao amin'ny Soundcloud:
Namaly ireo fanontaniana avy amin'ny mpihaino nandritra ny Hangout ihany koa izahay. Ao amin'ny pejin'ny hetsika jerena raha te hahafantatra antsipirihany bebe kokoa.
Vakio ato ny fitantarana manontolo momba an'i Malala
Alefaso ao amin'ny Twitter, Facebook sy ny ao amin'ity pejin'ny hetsika ity, ny fanontanianao momba an'i Malala, Swat, sy ny fampianarana ao Pakistana. #GVFaceMalala
Raha hamaky vaovao fanampiny:
Fitantarana momba an'i Malala ato amin'ny GV.